Umkhiqizi nomhlinzeki waseChina NGOKWEMVELO | IMontary
1.Isicelo: Ikhishi lendlu, irestshurenti, ihhotela, inxanxathela yezitolo, isikhungo sezohwebo, iphrojekthi, ubunjiniyela, njll
2.Factory:Sinomugqa wokukhiqiza osezingeni eliphezulu kakhulu kanye nabenzi bezinto abanolwazi kakhulu; Singahlangabezana nosayizi wakho okhethekile noma izidingo zombala kumashidi nezidingo ezikhethekile zomklamo kumikhiqizo eqediwe ngomshini wokuqopha we-CNC.
Izinto: Itshe Lemvelo
2. Ifektri: Sinolayini wokukhiqiza osezingeni eliphakeme kakhulu kanye nabenzi bezinto abanolwazi kakhulu; Singahlangabezana nosayizi wakho okhethekile noma izidingo zombala kumashidi nezidingo ezikhethekile zomklamo kumikhiqizo eqediwe ngomshini wokuqopha we-CNC.
Imikhiqizo I-countertop yekhishi lemabula
Isicelo / ukusetshenziswa ekhishini
Imininingwane Yosayizi Kutholakala ngosayizi abahlukahlukene bemikhiqizo ehlukile
(1) Osayizi bama-countertops: 96 ”x26”, 108 ”x26”, 96 ”x36”, noma usayizi owenziwe ngezifiso, njll.
(2) Ubukhulu: 20 MM noma 30mm
(3) Imininingwane eyenziwe ngezifiso iyatholakala;
Ukuqedelwa Kwaphezulu Ipholile
Iphakheji (1) Amakhreyithi anamandla olwandle asolwandle;
(2) Kutholakala ngezidingo zokupakisha ezenziwe ngokwezifiso;
Onke amaphakheji angenhla azofakwa isitimu ukuze kuthunyelwe ngaphandle;
Izinto Imvelo Imabula
Ubukhulu 18 mm
Inqubo Yezobuchwepheshe Senza iziqongo zamatshe ngemabula yemvelo, sinqunywe ngomshini bese sipholishwa ngabasebenzi bethu abanolwazi nabanolwazi.
1.Are inkampani ukuhweba noma ifektri? Siyimboni, engakunika ikhwalithi ephezulu ngentengo eshibhile.
2. Yiziphi izinkinga ezingaba khona ngenqubo yokufaka? Itshe lemvelo linekhwalithi entekenteke, sicela ukhumbuze isisebenzi ukuthi siphathe ngobumnene kwinqubo yokufaka, siphakamisa ukuthi u-ode isikwele esithe xaxa ukuze ulungiselele usuku lwemvula. Futhi, yonke imikhiqizo yethu iqinisekisiwe, ukuthengisa kwethu kuzoxazulula izizathu futhi nakanjani uzonxeshezelwa ngokufanele.
3. Ngingathola amasampula wamahhala? Yebo, isampula yamahhala iyatholakala. Kepha udinga ukukhokha izindleko zezimpahla.
4.Ngingayenza yini imikhiqizo kusuka kumiklamo yethu? Yebo, senza i-OEM ne-OBM.
Langaphambilini Netshe SINTERED
Olandelayo: nano ingilazi ekhishini countertop
I-Natural Black Marble Slab
Imabula Yemabula Yemvelo